सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्छु – कुमार पन्त, उम्मेद्धार अध्यक्ष « Janata Times
सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्छु – कुमार पन्त, उम्मेद्धार अध्यक्ष
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २००३ मा स्थापना भयो, १७ वर्ष लागेको छ । स्थापनादेखि नै हामीले गैरआवासीय नेपालीले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको समृद्धिका लागि लिएर आउँछौं भनेका थियौं । पुँजी ल्याउन महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरिसक्यौं । व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण छ र प्रसस्त मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिराख्नुभएको छ । लगानी पनि ल्याउनुभएको छ । ज्ञान, सीप र प्रविधि पुँजीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । २५–३० वर्षयता धेरै मानिस बाहिर जानथालेका छन् । धेरै त ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकेर पेन्सन हुने अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ । उहाँहरू आफूले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको हितमन निम्ति निस्शुल्क दिन चाहनुहुन्छ ।
पैसा हुनेले मात्रै एनआरएनएको चुनावमा सहभागी हुने भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले कति खर्चगर्दै हुनुहुन्छ  ?
मतदाता आउने–जाने हवाई भाडा, खाने–बस्ने होटल खर्च र भोट किन्नेजस्ता विकृति धेरै सुनिएका हुन् । त्यसकारण तपाईंको पनि खर्च त धेरै होला नि ?
धेरै चलखेल काठमाडौं आउने प्रतिनिधिहरूमा हुने रहेछ । घर–घर बसेर भोट हाल्न पाउने भएपछि कसैले पैसा खर्च गरिराख्नु पर्दैन। अहिले हामीले २५ सय सहभागीलाई काठमाडौं बोलाएर भोटिङ गराइराखेका छौं । अबको २–३ वर्षमा न्यूनतम ४–५ लाख सदस्य हुन्छन् । तिनलाई कुनै स्रोत परिचालन गर्नु पर्दैन र सम्भव पनि हुन्न । त्यो भइसकेपछि सबै विकृति हट्छन् ।
अब आउने नेतृत्वले संसारभर डुलिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्न । आज प्रविधिको जमाना छ, आफ्नो भिजन सोसल मिडियामार्फत राख्न सकिन्छ । यसो भइसकेपछि र संस्थाको संरचनालाई परिवर्तन गरिसकेपछि विकृति स्वत हट्छन् । म एकदम चोखो छु, पैसा खर्च नगरी चुनाव उठिराखेको छु म भन्दिन । विकृति छ । झुटो बोल्यौं भने हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौं ।
चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार कुनै पार्टीले निर्णय गर्ने, अधिक राजनीतीकरणजस्ता विकृति पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ नि  ?
मनिसको विभिन्न खाले व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो राम्रो चिनजान छ । व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा मानिसले सत्तानिकट भन्नुभएको होला । त्यसो हो भने त मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ । उहाँसँगभेट्दा हार्दिकता देखाउनुहुन्छ । जर्मनीमा पनि उहाँ आउँदा हामीसँग भेटघाट गरेर जानुभएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध हो । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँ त मेरै घरमा बस्नुभएको थियो । उहाँ आज बाँचिरहेको भए मलाई उहाँ नजिक मान्छे भन्थे होलान् ।
हामी पनि भूमाफियाको जालोमा फँस्यौं कि भन्ने लाग्छ । हामी सामाजिक संस्था हौं । मुनाफा कमाउन बनेको संस्था होइन । यो नेपालको समृद्धिनिम्ति बनेको संस्था हो । सामाजिक संस्था भएकाले राज्यले भोलि तपाईंहरू छाडेर जानुस् भन्ने अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन । हाम्रो संस्था परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएको छ । हाम्रा सदस्यबाट १\_१ डलर उठाएर बनाएको भवन हो । त्यो जग्गा सरकारकै भए पनि केही फरक परेन । कमसेकम ५०–१०० वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिए भइहाल्छ । कार्यालय छाडेर जानुपर्ने स्थिति आउँंछ जस्तो लाग्दैन ।
मनोनयन दर्ता क–कसको हुन्छ, मलाई थाहा छैन । पत्रपत्रिकामा आएको भरमा सबैको मनोनयन दर्ता हुन्छ भन्ने छैन । पत्रपत्रिकामा नआएकाहरूले पनि मनोनयन दर्ता गरेको इतिहास छ । सामाजिक संस्था हो, यसमा सबैले मिलेर जानुपर्छ, सहमतिको वातावरण बनाउन म लचक छु । मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु । यो लिन आउने होइन, दिन आउने ठाउँ हो । (कान्तिपुर)